Addis Ababa-Madaxda Afrika ee ku kullankoodii 35aad ugu soo dhamaaday dhawaan caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa ayaa cambaareeyay afgambiyadii dhowaan ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaaradda kuwaasi oo dhamaantood ay la wareegeen ciidamo militeri ah.
Midowga Afrika ayaa sheegay inay xubinimadii ka joojiyeen afar waddan oo kala ah Burkina Faso,Guinea, Mali iyo Sudan.wadamadan ayaa tan iyo markii uu ka dhaceen afgambiga waxey ka bixi waayeen qalalaaso siyaasadeed taasi oo galaafatay naf iyo maalba.
Hiran State at 2:53 PM
Modishu-Madaxweyne Farmaajo oo maalmahii tagay booqasho ku joogay magaalada Addis Ababa oo uu kala qeyb galay shirkii ururka midowga Africa ayaa dib ugu soo laabtay Mogdishu.
Dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay Safiirka Cusub ee Dowladda Maraykanku u soo magacawday Soomaaliya Amb Larry André.
Amb Larry ayaana ka mahadceliyey soo dhoweynta loogu sameeyey xarunta Villa Somaaliya,Safiirkaan cusub ee Soomaaliya ayaa ka mid ah safiiro badan oo dalka Soomaaliya ay ka joogaan wadamo badan oo daneeya arimaha Soomaaliya.
Hiran State at 2:06 PM
Mogdishu(Hiran State)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo mar kale siweyn uga hadlay xaalada dalka siiba abaaraha oo kulan kula qaatay xafiiskiisa qaar ka mid ah Culimaa’udiinka, Ururrada Bulshada iyo Ganacsatada Soomaaliyeed oo uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso.
RW Rooble ayaa ku celiyey mar kale in ay lagama maarmaan tahay in shacabka iyo dowladduba iska kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadkeenna abaartu saameysay guud ahaa gobollada dalka.
“Way ka sii dareysa xaaladda abaartu, haddii aan dadaallada gurmadka la dedejin lana mideyn, waxay u xuub siiban kartaa macluul keenta masiibo xoog badan” ayuu yiri Ra’iisulwasaarahu, oo mar kale ku celiyay in dalku ku jiro xaalad abaareed oo saameysay in ka badan 5 Milyan oo Soomaali ah loona baahan yahay in loo gurmado.
Hiran State at 1:18 PM
Hidaha iyo dhaqanka waa dhaxalka umadkasta oo dunidani ku nool dadka Soomaaliyeedna waxey caan ku yahiin dhaqan aad u wanaagsan oo ku dayasho mudan marka loo eego dhaqashada xoolaha noocyadooda kala duwan sida Geela, Ariga iyo Loda.
Waxaa intasi u dheer agabka ama alaabta ay u adeegsan jireen ama ay u adegsadaan noloshooda iyadoo ay u dheer tahay ciyaaraha noocyadooda kala duwan kuwaasi oo aanan halkaan lagu soo kooi karin.
Marka laga soo tago dhaqanka soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed waa dad ku caan baxay deeqsinimo ,isu gargaar iyo hal abuur kaasi oo ku adag umado badan oo dunidan ku nool.
Hiran State at 9:29 AM
Heritage and Culture / Hidaha iyo Dhaqanka